Inona ny fomba fanao SEO tsara ho an'ny mpanoratra no azonao soso-kevitra?
Amin'ny 2017, ny votoatim-pahalalàna dia fanapahan-kevitra amin'ny fahombiazan'ny SEO. Amin'izao andro izao, sarotra ny mandà ny maha-zava-dehibe ny votoatiny mampientanentana sy mahaliana izay mahasoa ny mpamaky.
Androany aho dia hilaza aminao ny fomba hananganana votoaty toy izany tsy misy mpitsidika manoratra manokana. Tsy mila mividy kopia matihanina intsony! Vakio ary araho ny fomba fanao SEO voalaza etsy ambany ary azonao antoka fa hahasarika bebe kokoa ny tranokalanao.
Fahadisoana dimy SEO momba ny famokarana ambaratonga voalohany
Ny Google sy ny fitaovam-pikarohana lehibe hafa dia mifantoka amin'ny fanolorana ny traikefan'ny mpampiasa indrindra - играть бесплатно игры бегемотик. Ireto ny fikarohana goavam-be dimy ao amin'ny Google izay tokony hoeritreretin'ny mpanoratra tsirairay:
Ny votoatiny manokana
Rehefa mamorona votoaty ho an'ny tranonkalanao, dia asio lahatsoratra, blaogy na fotsy papers, ataovy azo antoka fa izy ireo no voalohany. Tadidio fa ny tanjonao voalohany dia tokony hamokatra votoaty vaovao sy manan-danja izay mahasoa ny mpamaky. Aza manadino, aza mieritreritra, tsy mamorona ny tenyo amin'ny alàlan'ny tenimiafina be loatra - ny dika mitovy votoana dia mety hanimba ny SEO anao.
Mba hisorohana ny sazin'ny Google Panda, ny hany zavatra ilainao atao dia ny miteraka votoaty mampidi-doza sy sarobidy. Toy izao manaraka izao: amin'ny fanomezana ny sandan'ny mpanjifa, ny votoaty manan-danja dia manome azy ireo antony hijanonana ao amin'ny tranokalanao koa.
Soso-kevitra: Ny taham-pitenenana ambony, ary ny taha ambany amin'ny tsindry ambany, dia marika amin'ny votoatin'ny kalitao. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia mety handinihanao ny fanoratana ny votoatiny ao amin'ity pejy web ity.
Ny fampisehoana ireo mpitsidika amin'ny tranokala dia ny antsasaky ny ady. Ny antsasaky ny antsasany dia tokony hisarika ny sainy ary haniry ny handany fotoana bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Inona no azonao atao? Tsotra ny valiny: amin'ny fanintonana ny karazana mpihaino tsara. Ny votoatiny izay misy fehezanteny manan-danja manokana dia manampy anao hahasarika ny fisainana mety, amin'ny fanamafisana kokoa ny olona hamantatra ny tranokalanao amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Soso-kevitra tena ilaina: Ny tranonkalan'ny orinasa dia tokony ho tsara kokoa ho an'ny roa tonta: ny marika sy ny teny keyword misy anao. Ny fampiasana ny atidoha eo akaikinao amin'ny paikadinao ho an'ny tenifototra dia hevitra tsara ihany koa.
Aorian'ny fikarohana ny teny fanalahidinao, dia eritrereto hoe aiza no hametrahanao azy ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Azonao atao ny mizara pejy iray amin'ny faritra maromaro, toy ny lahatsoratra momba ny vatana, ny lohateny, ny sidebar ary ny tongotra. Mba hampitomboana ny fahitana ny sari-tranonao, dia amporisihina ny hametrahana teny fanalahidy ao amin'ny pejin-dohatenin'ny lohan-dahatsoratra sy ny vatana.
Lany daty farany
Na dia mbola tsy misy ny halavan'ny fotoana tokony horaisina ho "ny votoaty tsara indrindra", ny tsara indrindra Tokony ho 500-800 ny teny ary mihoatra ny pejy. Ho an'ireo mpampiasa izay mbola tsy nampiasainao hatramin'izay, dia zava-dehibe tokoa ny mahatakatra ny momba anao. Ampio izy ireo handoko sary amin'ny antsipiriany momba ny traikefa ananany. Mariho fa ny fitaovam-pitadiavana tahaka an'i Google dia mankafy kokoa votoaty bebe kokoa noho ny votoaty fohy kokoa.
Na dia zava-dehibe aza ny làlan-dia, dia tadidio fa ny motera fikarohana dia mifantoka ny lanjan'ny votoaty sy ny ilàna ny halavany.
Manantena ianao fa nankafy ireo toro-hevitra SEO teo aloha ho an'ny votoaty voasoratra. Ampiharo ireo fomba fanao SEO ireo any amin'ny orinasanao ary jereo ny lalao fiaramanidina!